စိုင်းသည် ရေချိုးခန်းထဲ၌ တကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားထားသည့် အကြောအချှုများပြေပျောက်စေရန် ရေပန်းအောက်တွင် စိမ်ပြေနပြေရေချိုးနေပါသည်။
ထို့နောက် ရေတ၀ကြီးချိုးပြီးလေမှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် မွှေးပွတဘက်ကြီးတထည့်ဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ် အောက်ပိုင်းသို့ပတ်ထားလိုက်လေသည်။
ရာဂစိတ်များ၏ နွယ်းနယ်မှုကြောင့် ပင်ပန်းထားသည်ကို ပြေပျောက်စေချင်သောကြောင့် လက်ကျန်ရှင်းရန် ကျန်နေသေးသည့်အရက်ဝိုင်းကို တကိုယ်တည်း ပြန်လည်လှုပ်ရှားစေပါသည်။
ထိုသို့ဧည့်ခန်းစားပွဲပေါ်တွင် အ၀တ်အစားမလဲသေူဘဲ ဖီလင်အပြည့်ယူနေသောစိုင်းသည် အရက်ကလေး တမြမြနှင့် အပျိုဖြန်းကလေး ဝေေ၀အား လိုးခဲ့ရပုံနှင့် တခုလမ်မလေး ခင်ခင်၏ ရာဂစိတ်ကြီးမားလွန်းသည်ကို ပြန်လည်စမြုံ့ ပြန်နေစဉ်တွင် တိုက်ရှေ့ ၌ မီးခိုးရောင် ဖီးထက်ကာတစင်း ၀င်လာပါသည်။
ကားပေါ်တွင် ချောမောလှပသည့် မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပါရှိ၍ တယောက်က စိုင်း၏ဇနီးမိမိပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တဦးကို မြင်လိုက်ရသောအခါတွင် စိုင်းသည်အံ့အားသင့်သွားရပါသည်။
သူမသည် ဇော်အောင်၏ ဧည့်ခံပွဲတွင်တွေ့စဉ်တုန်းကလို ပါဝါမျက်မှန်မတပ်ထားပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူမမှာ လည်းဘီးမျက်မှန်ကို တပ်ထားပါသည်။
စိုင်းသည် တဒင်္ဂအတောအတွင်း မိမိ၏အလှနှင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်၏ အလှဝယ်ယစ်မူးနေပါသည်။ သူမသည် ဆံပင်ကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်တွဲထုံးလေးပင်ဖြစ်ပါ၏။ လည်တိုင်က အရစ်ကလေးသုံးရစ်နှင့် စင်းစင်းလေး ဖြစ်နေပေသည်။ အသားရောက်က ၀ါဝင်းနေပြီး ၀တ်ထားသည့် အရောင်ကလည်း ဖော့ရှန်အ၀ါရောင် ပါးပါးကလေးပင်ဖြစ်သည်
လက်မောင်းသားလေးများက အင်္ကျီအ၀ါရောင်လက်ပြတ်အောက်တွင် တစ်တစ်ရစ်ရစ်လေးဖြစ်ပြီး ဆင်စွယ်လက်မောင်းတစကို တွေ့နေရပါသည်။
လုံချည်ကလဲ ဖေ့ါရှန်အပါးစား အ၀ါရောင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပျော့ပျော့အိအိ ဖော့ရှန်သားအောက်တွင် စင်းလုံးချောသည့် ပေါင်တန်လေးများက အောက်ခံပင်တီဘောင်းဘီအောက်က အသားများကို တင်းနေသယောက်မြင်တွေ့ရပါသည်။
သူမက ကားတံခါးကိုဖွင့်၍ ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ရှေ့  ငိုက်၍ ဆင်းလိုက်သည်။ သည်တွင်ခါးနှင့် တင်ပါးထက်တွင် လက်နှစ်လုံးလောက် ရွှေဝါေ၇ာင်း ၀င်းလက်သွားသဖြင့် လျှပ်စီးတန်းကလေးလက်လိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ သိမ်နွဲ့နွဲ့ခါး၊ ဖွံ့ထွားထွားတင်မှာ အိစက်နုညံ့လှသည့် ဖေ့ါရှန်သားလုံချည်အောက်တွင် တင်ပဆုံအိအိကလေးလှုပ်ခါနေပါသည်။
စိုင်းသည်မနေ့ကမှ တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့်ကျော့အား ယခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး ပြန်လည်တွေ့လိမ်မည်ဟု မထင်ပါ။ ထို့ပြင် မိမိနှင့် အတူရောက်ရှိလာသည့်အတွက် မို့မို့ထွားထွားလှပခြင်းများ ပြိုင်ဆိုင်နေကြသည့် အလှပိုင်ရှိင်နှစ်ဦးကို ငေး၍ ကြည့်နေယင်းပင် ပြုံးရယ်စွာဖြင့် ဧည့်ခန်းစားပွဲဆီသို့ဝင်လာနေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
ကိုကိုစိုင်းရေ ဟောဒါက မိမိနဲ့ကျောင်းတုန်းက တခန်းထဲသားချင်းပါ။ ခုနဈေးမှာ ဈေးဝယ်ယင်း ပြန်တွေ့ကြလို့ အိမ်ကို ခေါ်လာတာလေ။ ကျော့ရေ ဟောဒါဒို့ရဲ့  ကိုစိုင်းပေ့ါ။
ဟဲဟဲ သိရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။ မိမိရယ် မနေ့ကဇော်အောင်တို့ဆီမှာကတဲက ကျော့နှင့်ကိုစိုင်းတို့က မိတ်ဆွေဖြစ်လာကြတာပါ။ မနေ့ညက ပြောမလို့ပါနော်….။ ဒါပေမဲ့ စိုင်းသည် မနေ့ညကဘယ်သူ့အကြောင်းမှ ပြောပြချိန်မရလိုက်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးသည် အချစ်နိဗ္ဗာန်ဘုံ အလည်တခေါက်တို့ ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒါပေမဲ့၏နောက်တွင် စကားဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘဲ မီမီအားပြုံးစေ့စေ့ဖြင့် ကြည့်နေရပါသည်။
“ကဲပေါတော် တကထဲမှဖြင့် နောက်ကျမှ အလွမ်းသယ်ကြပါနော် လိုယင်းကိစ္စကိုပြောအုန်းမီမီရဲ့ ..” ဟုကျော့က ၀င်ပြောလိုက်မှ
‘ကိုစိုင်းရေ. ကျော့ကရုံးကိစ္စနဲ့ မြို့ ကိုသွားမလို့ အဲဒါ မီမီရောလိုက်သွားမယ်နော်… မေမေတို့ဆီကို မရောက်တာလဲကြာနေပြီ.’
‘ဒါပေမယ့်..ဒါပေမယ့်ပေ့ါနော် နော် ကိုကိုစိုင်း မီမီလိုက်သွားမယ်နော်….မနက်ဖြန်ပြန်လာမှာပါကွယ်.’
ပြောယင်း ကျော့ရှိနေသည်ကိုပင် သတိမထားနိုင်တော့ပါ။ ကိုစိုင်း၏ နွေးထွေသော နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးအား လျင်မြန်စွာဖမ်းယူစုတ်နမ်းလိုက်လေသည်။ ထို့နောက်စိုင်း၏ ပါးတဘက်တချက်စီကို ရွှတ်ကနဲ့နမ်းယင်းဖြင့်….
‘ဟွင်းနော်..ကိုကိုစိုင်း မီမီမရှိတုန်းဒါကြီးတောင်နေတိုင်း လျောက်အလေလိုက်မနေနဲ့နော်… အပြင်ကိုမထွက်ရဘူးနော် ဒါဘဲ….’
ပြောယင်းတန်းလန်းနှင့်ပင် တံဘက်ဘောက်တွင်ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေသည့် လီးရှိသည့်နေရာသို့ ညင်သာစွာ လက်ဖြင့်ပုတ်လိုက်၊ ဆောင့်ဆွဲလိုက်နှင့် လုပ်နေပါတော့သည်။
စိုင်း၏အဖြစ်ကိုလည်း ကြည့်ပါဦး။ ရေချိုးပြီးအ၀တ်မလဲသေးဘဲ မွေးပွတံဘက်ကို ပတ်ထားပေမယ့် ဧည့်ခန်းစွားပွဲပေါ်သို့ ခြေထောက်ခွဲထားပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပိုးလိုးပက်စက်ထိုင်နေသည့် အတွက် ၀တ်ထာသည့်မွှေးပွတဘက်ကွဲကြောင်းသည် ပေါင်ရင်းထိရောက်နေပါသည်။
ဖြူဖွေးနေသည့် ပေါင်တန်ရှည်တွင် အမွှေအမျှင်များ ထူထပ်စွာပေါက်နေသေး၍ ကြည့်မြင်တွေ့နေကြသူများအဖို့ အသည်းယားစရာဖြစ်ချေလိမ့်မည်။
ကျော့ရှိနေသည်ကိုပပ်င သတိမရတော့ဘဲ ထင်တိုင်းလုပ်နေသည့် မီမီအား ကြက်သေသေ၍ ကြည့်နေမိပည်။ ကျော့သည် အပျိုကြီးပီပီ ရှက်ရမှန်း၊ မျက်နှာလွှဲပစ်ရမှန်းပင် မသိတော့ဘဲ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို စိုက်၍ ကြည့်မိပါသည်။
မိမိသည် ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်ပင် အနွေအင်္ကျီယူရန် အခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားပါတော့သည်။ ထိုအခါမှ မိမိ၏ ရှေ့ မှာပင် မသင့်တော်သည့်ပုံစံအနေအထားရှိနေသော်လည်း ခြေပြင်ကာဆက်လက်နေထိုင်နေသည့် အတွက်ကြောင့် ခုနက မီမီနှင့် ကွယ်နေသော စိုင်းအား အနီးကပ်ဆုံး မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နေရပါသည်။
စိုင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာကျစ်လျစ်တောင့်တင်း၍ ရုပ်ချောသော ယောက်ျားတဥိးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းလက်နှင့် ၀မ်းဘိုက်များတွင်လည်း မွှေညှင်းစိမ်းမျာဖြင့် ပို၍ပင်နုနေပေသေးသည်။
အကယ်၍များ တဘက်သာမရှိပါက တကိုယ်လုံးမွှေမျှင်များဖြင့်ပင် ကိုယ်လုံးတီးပုံကို စိတ်မှခန့်မှန်းကြည့်မိသည်။
သူမ၏မျက်စေ့များသည် အရက်ရှိန်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေမလား ဒါမှမဟုတ် ရမက်ခိုးအရှိန်ကြောင့်ပင်လားတော့ မသိပါ ရီဝေ၍ရဲနီနေပါသည်။
မွှေးပွတဘက်၏ အလက်နေရာတွင် မို့မောက်နေသည့် သဏ္ဌာန်တခုက နိမ့်ချီမြင့်ချီလှုပ်ရှားနေသောကြောင့် ကျော့ကစိုက်ကြည့်နေသည်ကို စိုင်းကမသိချင်ယောက်ဆောင်ပြီး မွှေးပွတဘက်ပေါက်ထွက်လုနီးပါဖြစ်သွားရလောက်အောင် စိုင်း၏ပုန်းရှိုးကွယ်ရှိုးဖြစ်နေသည့် လီးကြီးအား တဆက်ဆက်လှုပ်ရမ်းပေးနေမိပါသည်။
ထိုစဉ်မီမီသည် ဧည့်ခန်းထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်လာပါသည်။ စိုင်းသည်သူမတို့အား ကားဆီလိုက်ပိုရန် ကုလားထိုင်မှ အထတွင် ခါးတဖက်တချက်တွင် ညှပ်ထားသည့် မွှေးပွတဘက်စက ပြေလျော့၍ အောက်သို့ပုံကျသွားပါသည်။
ထိုအခါတွင် ခုနက မီမီလက်ဖြင့်ကိုင်ထားပေသည့် အရှိန်ကြောင့် အထဲကတောင်နေခဲ့သော လီးကြီးသည် ကျော့အား မိမိ၏လီးကြီးကြောင်းကြွားနေခဲ့သည့်ရမက်အတွက်ကြောင့် လီးကြီးသည် တောင်မတ်၍ နေပေသည်။
ထို့ပြင် တငေါက်ငေါက်ဖြင့် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေပါသည်။
ဧည့်ခန်းထံရှိသူတို့မှာ ငေးကြောင်နေပြီး စိုင်းသည်ပင်လျှင် တဘက်ကိုပြန်ပတ်ရန် သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေပါသည်။ မိန်းမသားနှစ်ဦးမှာလည်း ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ မျက်နှာလွှဲခြင်းမရှိခဲ့သည့်အပြင် စိုင်း၏ တုတ်ခိုင်မာကြောသောလီးကြီးအား ငေးစိုက်ကြည့်နေမိပါတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် စတင်လှုပ်ရှားသူက မိမိရယ်ပါ။
‘ဟယ်..ကြည့်စမ်း..ကြည့်စမ်းပါအုန်း…မီမီတောင်အပြင်မရောက်သေးဘူး၊ အကဲထနေပြီနော်… ဒါဘဲနော်..ကိုကိုစိုင်း မီမီအပြင်သွားနေတုန်း ပွေနေယင့်တော့ အသိဘဲ’
ပါးစပ်ကပြောယင်ပင် မည်သူမှမရှိသည့်အလား စိုင်း၏နီထွေးပြန့်ကားနေသည့်ဒစ်ကြီး တဆတ်ဆတ်မာန်ထနေသော လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားရပါရ ဆုပ်ကိုင်ပြီးနောက်မှ အားမလိုအားမရဖြစ်လာသည့်အခါ မီမီ၏ပါးစပ်ဖြင့်သာ ကိုက်မိပါတော့သည်။
ထို့ပြင် လီးကြီး၏ရှေ့ ဖျားပိုင်းရှိ ကြီးမာသောဒစ်ကြီးကို လျှာဖြင့်ကလိပေးနေခြင်း၊ မီမီ၏ပါးစပ်ထဲသို့ ရှေ့  တိုးနောက်ဆုတ် လိုးနေသည့် ပုံဏ္ဍာန်မျိုး လုပ်ပေးနေပါတော့သည်။ စိုင်းသည် ကျော့၏ရှေ့ တွင်ဖြစ်လင့်ကစာ သူ၏လီးကြီးအား ဤကဲ့သို့  ကာမရသ၏အဓိကသော့ချက်ကို ဖွင့်လှစ်နေသောကြောင့် တကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်များသည် ကဖြင်းဖြင်းအရှိန်တက်လာပါ၍ မီမီ၏ခေါင်းအား အားရပါးရ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်းထားပြီး ဖီးလ်အပြည့်အ၀ခံစားနေရသည့်အလား မျက်လုံးများပင် မှေးစင်း၍ ထားပါတော့သည်။ နောက်မှ မီမီသည် ကျော့ရှိသည်ကို သတိရပြီး..
‘ဟင်း..ဟင်း…ကိုကိုစိုင်းရယ်. အပျိုကြီးရှေမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်…တော်ကြာ သူလဲမီမီတို့အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး လင်လိုချင်သွားလိမ့်မယ်နော်…’
ကျော့အားနောက်ပြန်ကြည့်ယင်း ပြုံးစေ့စေ့ဖြင့် စနေပါတေ့ာသည်။ စိုင်းကလည်း အသိတရားပြန်ရောက်လာသောကြောင့် ပုံကျနေသည့် မွှေးတဘက်အား ပြန်ကောက်၍ ခါးပေါ်သို့ ပြန်ပတ်ထားလေတော့သည်။
ကျော့သည် ဒီအသက်အရွယ်ရောက်လာသည်အထိ ကာမစပ်ရှက်ကြပုံများနှင့် အာသာဖြေလာသည့် နည်းပေါင်းစုံကို အတွေ့အကြုံ့ ရင်သူပီပီ နိုင်ငံခြားမှလာသည့်စာအုပ်များမှ တွေ့ရုံမြင်ဘူးရုံသာ ရှိခဲ့ဘူးသော်လည်း အခုလို အပြင်ဘက်တွင် အနီးကပ်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အပြင် ကာမစပ်ရှက်မှုအတွက် နှုးဆွပေးနေသောအဖြစ်အပျက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင့်တွေ့လိုက်ရသဖြင့် အိမ်တွင်းပုန်း တဏှာရမက်ကြီးသော ကျော့၏ရင်ထဲမှာ တဖိန်းဖိန်းတရှိန်းရှိန်းဖြစ်လာပြီး အာခေါင်များပင် ခြောက်သွေ့လာခဲ့ပါသည်။
နောက်ပြီးတော့ စိုင်းကို တပ်မက်မောသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်ယင်း တချိန်ချိန်တွင် ထိုသို့သော ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးကြီးပိုင်ရှင်ဖြစ်သူများနှင့် တွေ့ချင်စမ်းပါဘိဟု ရင်တွင်းမှ ကြိတ်ပုန်းကြိမ်းဝါးမိလိုက်ပါတော့သည်။ ထို့နောက်ကျော့နှင့်မီမီတို့သည် စိုင်းအားနှုတ်ဆက်၍ ကားပေါ်တက်ရောက်ကာ မောင်းထွက်သွားလေတော့သည်။
နောက်တနေ့မနက်တွင် မြို့မှကျော့ကျော့ခိုင် ပြန်လည်ရောက်လာသောကြောင့် စိုင်းသည်ထိပ်ထိပ်ပြာပြာဖြင့်ပင် ကြိုဆိုမိတော့သည်။ ဤတွင် ကျော့ကျော့ခိုင်က စိုင်းရယ်ဖြေးဖြေးမေးရောပေ့ါ. အခုလောလောဆယ်တော့ ကျော့ရဲ့ ပစ္စည်းများကို ယူချပေးပါ ဟုပြောနေသောကြောင့် စိုင်းသည် သွက်လက်စွာဖြင့် ကူညီပေးနေလေသည်။ ထို့နောက် အမောပြေစေရန် ကျော့အတွက် ၀ိုင်ချိုချိုတခွက်ကို ထဲ့ပေးပြီးလျှင် အကျိုးအကြောင်းကိုးမေးမိပါတော့သည်။
ကျော့သည် ခရီးပန်းလာသည့်ဟန်ဖြင့် ဧည့်ခန်းကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ရော့ရိရော့ရဲပုံစံအနေအထားနှင့် ညာဘက်လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော အရက်ချိုချိုတခွက်ကို မက်မောစွောမော့သောက်ယင်းမှ လမ်းမှာကားပျက်ကြောင်း၊ မီမီသည်မြို့  မှ မိဘများထံတွင်နေခဲ့ကြောင့်း၊ မိမိသည်လည်း အလုပ်ကိစ္စအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လာယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်လေးငါးရက်ခန့်မှ ပြန်၍သွားရမည်ဖြစ်ပါ၍ မိမိ၏အိမ်တွင် အမနှင့်တူမနှစ်ယောက်ထဲသာ ကျန်ခဲ့၍ ကိုစိုင်းမှ အိမ်လိုက်ပို့ပေးပါရန် ပြောပြလေသည်။
ထို့ပြင် စိုင်းနှင့်ကျော့တို့သည် စကားအေးအေးဆေးဆေးပြောကြဆိုကြနှင့် နောက်ပြီးတော့လည်း ပုလင်းထဲမှ အရက်သည်လည်း ဖန်ခွက်ထဲကိုရောက်၊ ဖန်ခွက်ထဲမှ အရက်များသည်လည်း လက်များမှတဆင့် ပါးစပ်ထဲဆီသို့ အများအပြားစီးဆင်း၍ ၀င်ရောက်လာကြသောအခါ တဦးနှင့်တဦး အာရွှင်၍ လာကြပါတော့သည်။
‘ကိုစိုင်းရယ် သောက်လို့တော့ ကောင်းပါတယ်နော်၊ ကျော့ရဲ့  အိမ်ကိုလည်း လိုက်ပို့ယင်းနဲ့ ကျော့ရဲ့ အမနဲ့ တူမကလေးတွေကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးယင်း အခုတခါတည်းလိုက်ပို့ပေးပါအုန်းနော်’
ခရာတာတာညုတုတုဖြင့်ပြောနေသော ကျော့အားစိုင်းသည် ရမက်တွေဝေနေသော အကြည့်ဖြင့်ကြည့်ယင်း ကျော့အားမိမိကားပေါ်တက်စေ၍ လိုက်ပို့ပေးစေပါသည်။ ကားပေါ်တွင် ကျော့သည် ကားစီးလာသည့်ဒဏ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စိုင်း၏အိမ်တွင်သောက်ထားသည့် အရက်အရှိန်ကြောင့်လည်းကောင်း ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ကောင်းကောင်းမထိုင်နိုင်တော့ပါ။ ကားမောင်းနေသည့် စိုင်း၏အပေါ်သို့ မှီ၍လိုက်လာသညါသည်။ စိုင်းသည်လည်း ထိတွေ့လျက်ရှိသော ဆန္ဒထက် အသွေးအသား၏ထိတွေ့မှုကြောင့် မိမိ၏သွေးများသည် ဆူပွက်၍လာပါတော့သည်။
ကျော့၏ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေမွှေရနံ့သည်လည်း မိမိ၏နှာခေါင်းဝတွင် ကလူကျီစယ်ကစာနေမှုကြောင့် မောင်းနှင်နေသော ကားစီယာတိုင်ကို လက်တဘက်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းမောင်းနေပြီး ကျန်လက်တဘက်မှနေ၍ မိမိဘက်သို့အိကျလာသော ကျော့၏ကိုလုံးကျစ်ကျစ်လေးအားဖက်ထာခဲ့ပြီး ဖြေးညှင်းစွာ ပွတ်သပ်ပေးနေပါတော့သည်။
ထို့ပြင် ကျော့၏ရှည်လျားသွယ်တန်းပြီး ဖြောင့်စင်နေသည့် ပေါင်တန်တလျောက်လုံးအား ဖွဖွလေး ပွတ်၍ပေးနေပါတော့သည်။ ကျော့သည် မှေးထားလျက်၇ှိသော မျက်ဝန်းတစုံကို မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြန်လည်ကြည့်ယင်းက
‘ဟင်းနော်… ကိုစိုင်းကလေး မီမီပြောလည်းပြောစရာဘဲ မနေ့တုန်းကတင် မီမီသတိပေးသွားပြီးသားနော်.. ကျော့ကိုလာပြီး အကဲထမနေပါနဲ့နော် မီမီနဲ့တွေ့ယင် တိုင်ပြောလိုက်မှာဘဲနော်..’
ပါးစပ်က ညင်းပယ်သည့်စကားလုံးများပြောနေသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ စိုင်း၏ပြုသမျှ နုနေရပါသည်။ ထို့ပြင် မိမိ၏ကိုယ်လုံးကလည်း စိုင်းဘက်သို့ ပူးကပ်နေပါသည်။ ကျော့သည် အားလုံးတွေ့ရှိထားရသော မိန်းမများထက်ပို၍ တနှာရမက်ကြီးပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် အတွေ့အကြုံရှိသော စိုင်းကလည်း ကျော့အား စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်ရည်မျှပြီး မီးကုန်ယမ်းကုန်ကြိတ်လိုက်ရလျှင် ကောင်းလေမလားလို့ စိတ်ထဲမှနေ၍ စဉ်းစားနေသော်လည်း သူ၏လက်တဖက်ကတော့ သူမ၏ကိုယ်မှ တစက္ကန့်ကလေးမျှမခွာခဲ့သေးပါ။
ထို့ပြင်ကျော့၏ပခုံးပေါ်မှ မိုး၍ဖက်ထားပြီးလျှင် အင်္ကျီလည်ဝိုက်မှ တွဲကျနေသည့်အောက်မှ ရုန်းကန်ထွက်နေသည့်အလား ဖွံ့ဖြိုးကြီးမားလွန်းသည့် နို့နှစ်လုံးအား ဟိုဘက်သည်ဘက်ရွေ့ လား၍ ကိုင်တွယ်ပွတ်ချေပေးနေပါတော့သည်။
‘ဟယ် စိုင်းရယ်..မကဲပါနဲ့ကွယ်။ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မကောင်းပါဘူးနော်.. အိမ်ရောက်လို့ရှိယင်.. ဟင်း…’
ကျော့၏ ဆက်၍ ပြောမည့်စကားကို ဆုံးအောင်နားထောင်ချင်ပါသော်လည်း ‘စိုင်းရေ ကျော့တို့တိုက်ကို ရောက်နေပြီ၊ အဲ… အဲဒီမှာဘဲရပ်ပြီး အစောင့်ကိုဟွန်းတီးပြီးခေါ်လိုက်ပါတော့နော်…’ ဟုနောက်ဆုံးပြောလိုက်ပါ တော့သည်။
စိုင်းသည် တိုက်ထဲသို့ဝင်သည့် ၀င်းတံခါးလာရောက်ဖွင့်ပေးစေရန် ကားဟွန်းကို ကြာရှည်စွာ တီးသော်လည်း ၀င်းတံခါးကို မည်သူမျှလာ၍ မဖွင့်ပေးပါချေ။ ထိုအခါတွင်ကျော့သည် စိတ်မရှည်တော့သည့်ဟတ်ဖြင့် ဒယီးဒယိုင်ဆင်းသွားလေတော့သည်။
စိုင်းသည် ကားကို တိုက်ရှေ့ ရှိ ပေါ်တီကိုအောက်သို့မောင်းသွားပြီးလျှင် ကျော့၏အလားကို စောင့်နေပါတော့သည်။
ကျော့သည် မိမိမရှိသည့်အချိန်တွင် တိုက်ကိုဂရုစိုက်ရန်သေသေချာချာမှာသွားခဲ့ပါသော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခေါ်သော်လည်း အစောင့်ကိုမတွေ့သောကြောင့် ဆူရန်ကားဂိုဒေါင်ရှိ အခန်းသို့ ရောက်ရှိသောအခါတွင် အစောင့်၏ကားဂိုဒေါင်အတွင်းမှနေ၍ ညည်းညူသံများကြားနေရသောကြောင့် ကျော့သည် ဘေးပြတင်းပေါက်မှနေ၍ ချောင်း၍ ကြည့်မိပါတော့သည်။
အခန်း၏အုတ်တမံသလင်းပေါ်တွင် ဖျာတချပ်ခင်းထားပါသည်။ ဖျာပေါ်တွင်အစောင့်ဖြစ်သူ မောင်အေးနှင့် အမဖြစ်သူ လှလှခိုင်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည်သူမျှမရှိသည့်အလား နှစ်ဦးစလုံးတွင် အ၀တ်အစားမဲ့စွာဖြင့် လိုးကြရန် တာစူ၍ နေပါတော့သည်။
မောင်အေးသည် လှလှ၏တကိုယ်လုံးရှိ အသားများ ပဲ့ထွက်မတတ် အပေါ်နှင့် အောက်ပွတ်ချေ၍ ပေးနေပါသည်။ ထို့အပြင် လှလှ၏ကြီးမားလှပသည့် နို့နှစ်လုံးအား ပွတ်ချေပေးလိုက် နို့သီးခေါင်းကို လက်နှင့်ချေပေးလိုက်၊ ပါးစပ်ဖြင့်လည်း စုပ်လိုက်ကိုလိုက်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါတော့သည်။
ကျော့သည်ရန်ထောင်ရန်လာသည့်ကိစ္စကို မေ့နေပြီး၊ ခုနက ဟွန်းတီး၍ ခေါ်မရသည့် ကိစ္စမှာလည်း ရှင်းပါပြီ။ ရာဂကိစ္စများကို မာန်တက်နေသောအခါတွင် ပတ်ဝန်ကျင်ကို ဥပက္ခာပြုပေတော့မည်။ ကြည့်ယင်း ကြည့်ယင်းနှင့် မောင်အေးနှင့်လှလှခိုင်တို့သည် အားမလိုအားမရဖြစ်လာကြသည်လို့ထင်ပါသည်။
တယောက်နှင့်တယောက်၏ အင်္ဂါဇာတ်မျာကို ကြမ်းတမ်းစွားကိုင်တွယ်နေကြရင်း ပို၍ရမက်ကြီးမားသော လှလှသည် မောင်အေး၏လီးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်၍ပေးပါတော့သည်။ မောင်အေးသည်လည်း မိမိလီးအား အားရပါးရစုပ်ပေးသောကြောင့် အကြောအချဉ်များ ကျင်တတ်လာပြီး ရမက်များလည်း ထလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိတ်မနိုင်ခဲ့မရဖြစ်နေပြီး ပါးစပ်ဖြင့်လီးကြီးအား မြိန်ရေရှက်ရေ စုပ်ပေးနေသည့် လှလှ၏ခေါင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွားဆုတ်ကိုင်ထားမိပါတော့သည်။
ထို့နောက် မောင်အေးသည် ကာမစပ်ယှက်ရန် စိတ်ထဲထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဖြစ်လာသည့်အလျောက် လီးကြီးအား အားရပါးရစုပ်ပေးနေသည့် လှလှအား ပက်လက်အိပ်စေပြီးလျှင် အပေါ်မှနေ၍ မီးကုန်ယမ်းကုန်တက်၍ လိုးနေပါတော့သည်။ အောက်မှနေသော လှလှခိုင်သည်လည်း အညံ့မခံပါ။ အပေါ်မှတက်၍ ဆောင့်လိုးနေသော မောင်အေး၏ခါးနှစ်ဖက်ကို တင်းကြပ်စွားဖက်တွယ်ထားပြီး သူ၏ဖင်ကြီးအား မြှောက်၍ ပင်ကော့ပေးနေပါတော့သည်။ မောင်အေးသည်လည်း စက္ကန့်အမျှ အားရပါရဆောင့်လိုးနေပြီးလျှင် သူ၏စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုတ်များကို စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဒလအောသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။ သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ နွမ်းလျစွာဖြင့် မှောက်ချိုက်ပါတော့သည်။
လှလှသည် သူမ၏လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်စုံလေဟန် တူပါသည်။ အောက်မှနေ၍ ဖင်ကြီးကို မြှောက်ခါပင့်ခါဖြင့် စောင့်ပေးနေပါသည်။ မောင်အေးကိုလည်း ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် ဆဲရေးတိုင်းထွာနေပါတော့သည်။
‘ဟင်း … သူ့လီးကြီးက ကြာကြာတောင် မတောင်နိုင်ဘဲ အရင်ပြီးတော့နော်၊ သူများကောင်းအောင် လုပ်မပေးဘဲနဲ့ ကဲလိုက်သေးတယ်။ တော်ပါပြီ နောက်ခါများ သူများစောက်ဖုတ်များလိုးချင်လို့ တောင်းလို့ရှိရင် မပေးတော့ဘူးနော်’ ဟု စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးပြောနေပြီး သူမ၏ကိုယ်ပေါ်တွင် ၀က်မှိန်းမှိန်းနေသော မောင်အေး၏ ကိုယ်ကြီးကို ဘေးဘက်သို့တွန်းချလိုက်ပါသည်။ သူမ၏ ကာမဆန္ဒမပြည့်စုံသေးသည့်အတွက် ပျော့ကျနေသည့် လီးအားတပ်မက်စွာစိုက်ကြည့်နေပြီး ပြည်လည်၍ နိုးကြွလာအောင်း နှိုးဆွပေးနေပေသည်။
မောင်အေး၏လီးကြီးသည် မောပန်းသွားသည့်အလား ပြန်လည်၍ ထောင်မလာတော့ပါ။ မောင်အေးသည်လည်း မိမိ၏ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုကြောင့် အာသာပြေသွားပြီဖြစ်သည့်အတွက် လှလှ၏ဘေးတွင် ဇိမ်ဖြင့်မှေးနေတော့သည်။ လှလှသည် မိမိ၏လိုအင်ဆန္ဒ မပြည့်စုံသေးပါ။ အခုမှ ကာမ၏အရသာကို စလုံးရေစခါရှိသေးသည်။ ရမက်ကြီးလှသော လှလှသည် မောင်းအေးကို အားကိုး၍ မရနိုင်မှန်းသိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် မိမိကိုယ်၏ ဆန္ဒရမက်သွေးပြေစေရန် နည်းလမ်းရှာဖွေရပါတော့သည်။
ဂိုဒေါင်အခန်းသည် ကာထားသည့် အခန်းဖြစ်နေ၍ အပြင်က ကားရေဆေးသည့်ပိုက်နှင့် တဆက်တည်းထားသည့်အပြင် ထိုရေပိုက်နှင့် ရေပိုက်လုံးရှိဖြင့် ပန်းခြံထဲရှိ ပန်းပင်များကို ရေလောင်းပိုက်ကို မြင်တွေ့လိုက်သောအခါတွင် အကြံတခု ရသွားပါလေတော့သည်။
ဤအကြံသည် မည်ကဲ့သို့အကြံဖြစ်ပါသနည်းဟု အသေးစိတ်ညွန်ပြချင်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် မောင်အေးကဲ့သို့သော ကာမစပ်ယှက်ရာတွင် တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး တဘက်သပ်ကြီးပြီးမြောက်စေ၍ အခြားတဘက်အတွက် အာသာမပြေမဖြစ်စေရန် အောက်တွင်ဖော်ပြလျက်ရှိသော လှလှခိုင်၏ (တကိုယ်တည်း ဆန္ဒဖြေဖျောက်နည်းကို ယူကြပါကုန်)။ ထို့ကြောင့် လှလှခိုင်၏ ကာမဆန္ဒ မပြေပျောက်သေးသည့်အတွက် တကိုယ်တည်း ကာမရမက်ဖြေဖျောက်နည်းကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုကြပါရန်။
လှလှခိုင်သည် အနီးအနားတွင်ရှိသော ရေပိုက်ကို ယူလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေတိုင်နှင့် ဆက်သွယ်စေပြီး ရေတိုင်မှ ခလုပ်ကို အဆုံးထိ ဖွင့်ချလိုက်ပါတော့သည်။ ပိုက်၏ အစွန်းတဖက်တွင် ကားရေဆေးရန်အတွက်နှင့် ပန်းပင်လောင်းရာတွင် အဝေးသို့ရောက်စေရန်အတွက် သံခေါင်းစွပ်တတ်ထားသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောရေအားသည် သေးငယ်သည့်အပေါကမှ ရုန်းထွက်လာသည့်အလား ပြင်းထန်စွာသက်ရောက်လျက်ရှိပါတော့သည်။ လှလှခိုင်စည် မိမိ၏ကြီးမားချောမွတ်သည့် ပေါင်နှစ်ဘက်ကို ဘေးသို့ကားနိုင်သမျှ ကားစေပြီးလျှင် မိမိ၏အာသာမပြေသေးသည့် ကာမဆန္ဒများကို ဖြေဖျောက်ရန်အတွက် တာစူနေပေသည်။ စောက်ဖုတ်ဝသို့ ရေပန်းဖြင့်ထည့်ထားစေပြီးလျှင် လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝစေရန် ဖြေဖျောက်နေပေတော့သည်။ ရေပန်းအားသည် ပိုက်၏ထိပ်ဝတွင်းသေးငယ်သော အပေါက်ဝမရုန်းကန်ထွက်လာရသောကြောင့် ရေပန်းအားပြင်းထန်နေပေသည်။
လှလှခိုင်သည် ပေါင်နှစ်ဘက်ကိုဘေးသို့ဖြန့်ကားထားပြီး လက်တဖက်ကနောက်ဘက်သို့ ထောက်ထား၍ ကျန်လက်တဘက်က ရေပိုက်ခေါင်းကို မိမိ၏စောက်ဖုတ်ဝနားသို့ ထားရှိစေပြီး တဟင်းဟင်းဖြင့် ကာမစိတ်များ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနေပါတော့သည်။ ရေပန်းမှ ပြင်းအားသည်လည်း လျော့မသွားပါ။ ခလုပ်အဆုံးထိဖွင့်ထားသောကြောင့် အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် ရေအားထွက်နေပါသည်။ လှလှခိုင်၏စောက်ဖုတ်ဝသို့ အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် ၀င်ရောက်ထိတွေ့နေပြီးလျှင် အတွင်းသားများအား အားရှိပါးရှိရိုက်ခတ်လာသောကြောင့် ဆူဝေနေသည့်ကာမရမက်များ ပြေပျောက်သဖွယ်ရှိပြီဟုထင်ပါသည်။
စိုင်းသည် ဘေးပြတင်းပေါက်မှ နေ၍ အထဲရှိသူများအား ကုန်းကုန်းကွကွဖြင့်ချေင်းကြည့်နေသာ ကျော့ကျော့ခိုင်ကို မြင်တွေ့ရသောအခါတွင် စိုင်းသည် ကျော့ကျော့ခိုင်၏ နောက်မှနေ၍ ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ အဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်မိသည်။ ကာမစပ်ရှက်နေကြသည့် အမဖြစ်သူလှလှခိုင်နှင့် မောင်အေးတို့ နီးကပ်စွာဖြင့် တွေ့လိုက်ရသောအခါ တကိုယ်လုံးရှိ သွေးသားများသည် ဆူပွက်နေပြီး တကိုယ်လုံးရှိ ကြွက်သားများသည်တုန်လာပြီး မိမိနောက်မှနေ၍ ဘယ်အချိန်ကတည်းကရောက်နေသည်မသိ ကြီးမာသောတင်ပါးဆုံပေါ်တါင် နွေးထွေးစွား ထိတွေ့နေသည့် စိုင်းလီးကြီးဖြင့် ပွတ်ဆွဲနေမှုကြောင့် ရာဂစိတ်များထလာသည်။ တကိုယ်လုံးရှိသွေးသားများသည် တရှိန်းရှိန်းတဖိန်းဖိန်း ဖြစ်လာပြီး ခြေထောက်များပင် မရပ်တည်နိုင်တော့ပါ။ ဒူးညွတ်၍ခွေလို့သွား၍ ရပ်လျက်ရှိသည့် စိုင်းသည်ညင်သာစွာ ပွေ့ဖက်၍ ကျော့ကျော့ခိုင်၏ နီထွေလှသည့် နှုတ်ခမ်းတစုံကို အငမ်းမစုပ်ယူပေးနေသည့်အပြင် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သော အချစ်၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသော အချစ်၏သော့ချက် (သို့မဟုတ်) ကာမ၏သော့ချက်များအားလုံးကို ဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေပေတော့သည်။
စိုင်သည် ကျော့ကျော့ခိုင်၏ နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်ယူနေရာမှ လျှာဖျားကလေးဖြင့် ကလိနေသေးသည့်အပြင် ကျစ်လျစ်တုတ်ခိုင်သည့် ကျော့၏ကိုယ်လုံးတလျောက်အား ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ပေးနေပါသည်။ ကျော့သည် သွေးသားရမက်ထဲမှ ဆူကြွလာသည့် ရမက်ဆိုးတွေကို တားဆီး၍ မရနိုင်တော့ပါ။ မနေ့တုန်းက စိုင်း၏ကြီးမာကျယ်ပြန့်သည့် လီးကြီးကို မြင်လာကထဲက စိုင်းနှင့်အလိုးခံချင်စိတ်ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါသည်။ အခုလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံတွေ့ကြရသော ကာမပွဲတော်ကြီးတွင် မကြုံလိုက်မဆုံလိုက်ရလျှင် မိမိသာလျှင်ငတ်လိမ့်မည်အထင်ဖြင့် မိမိ၏ဂုဏ်အရှိန်တောင် မငဲ့ညှာတော့ပါ။ နောက်ပြီး အပျိုကြီးဖြစ်သောကြောင့် ကာမဆန္ဒများကို မစားသုံးဘဲမနေတော့ပါ။ ကာမဆန္ဒများအနှံ့ပြင်းပြ၍ နေပြီးလျှင် စိုင်း၏ကာမဆန္ဒများကို အင်တိုက်အားတိုင်ဖွင့်၍ စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်စေရန်အတွက် အပျိုကြီးတဦးပီပီ ရှက်အားပိုနေသည့်အပြင် ကာမစက်ရှက်မှုအတွေ့အကြုံကို ရင့်ကျက်စေ၍ အပေးအယူမျှတလေအောင် စိုင်းအာပြန်လည်ဖက်တွယ်နေပြီး စိုင်း၏လုံချည်ထဲမှ ထိုးလို့ထောင်နေသည့် လီးကြီးအား အားရပါးရ ကိုင်တွယ်နေပါသည်။
ထို့နောက်ကျော့သည် မိုးတိုးမတ်တတ်ဖြင့် ကာမ၏သော့ချက်များ ပြိုင်တူဖွင့်နေရသည်မှာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာသည့်အတွက် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအချိန်မကြာသေးသောကာလတွင် တောင့်တခဲ့ရသော စိုင်းနှင့်အတူ ကာမပွဲတော်ကြီးတစ်ခုတည်ရန်အတွက် မိမိကရှေ့ တောင်ပြီး တိုက်ပေါ်ရှိ မိမိအခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပေတော့သည်။ အခန်းထဲသို့ရောက်သောအခါ စိုင်းသည်သူမထက်ဦးအောင်လှုပ်ရှားမှု ပြုလိုက်ပါသည်။ စိုင်းသည် ၀တ်ထားသော အ၀တ်အစားများကို လျင်မြန်စွာ ချွတ်လိုက်ပြီးလျှင် ကုတင်ပေါ်တွင် ပိုလိုးပက်လက်ဖြင့် တနှာကြည့် အကြည့်ဖြင့် မခို့တရို့ လုပ်နေသော ကျော့ဆီသို့သွားပြီးလျှင် ကျော့၏အပေါ်မှမိုး၍ နှုတ်ခမ်းအစုံကိုနမ်းယင်းဖြင့် သူမ၏လျာဖျားကလေးကို ကလိလိုက်သောအခါတွင် တကိုယ်လုံးရှိအကြောပေါင်းတထောင်သည် တပြိုင်တည်း နိုးကြွလာသည့်အလား တွန့်တက်၍လာပါတော့သည်။
စိုင်းသည်ကျော့၏ကိုယ်ပေါ်တွင်ရှိနေသေးသည် အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်သောအခါ ၀င်းဝါအိစက်နေသည့် သူမ၏အသားဆိုင်များကို မြင်လိုက်ရသည့်အပြင် ပုံဖေါ်သည့်ဘရာစီယာမဟုတ်သည့်အပြင် အရှိကိုအရှိအတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတောင်းတင်လှသည့် နို့နှစ်လုံးသည် အပြင်ဘက်သို့ ပြူထွက်၍နေသည်ကို တွေ့ရသောအခါတွင် စိုင်း၏ရာဂစိတ်များသည် မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ပါ။ တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းလည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ပါ။ ကြီးမားကျယ်ပြန်နေသည်ဟု ထင်ရသည် နို့နှစ်လုံးကြီးအား အငမ်းမရမြင်တွေချင် ထိတွေ့ချင်သည့်စိတ်များကိုလည်း မတားဆီးနိုင်တော့ပါ။ ကျော့၏ဘရာစီယာချိတ်ထားသော သံချိတ်ကလေးကို အလောတကြီး လျင်မြန်စွာဖြုတ်ပစ်လိုက်သောအခါတွင် ကျော့၏ကိုယ်လုံးနှင့် သူမ၏နို့နှစ်လုံးတို့သည် တင်းကြပ်စွာဖွက်ထားသည့်အလား ဒါမှမဟုတ် ဘရာစီယာအတွင်းတွင် မွန်းကြပ်စွာခိုအောင်းနေသောကြောင့် အပြင်သို့အပြေအလွှားတိုးထွက်လာသည့်အတွက် ကြီးမားကျယ်ပြန်သော နို့ကြီးနှစ်လုံးသည် ထင်သည့်ထက်ပို၍ ကြီးမားနေသောကြောင့် လွန်စွာရမက်ကြီးကြသောသူများ လာရောက်တွေ့ဆုံနေရသောကြောင့် စိုင်းသည်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့၇ှိရတော့မည်အတွက် ပျော်မြူနေပေတော့သည်။
စိုင်းသည် ကြီးမားလှသည့် နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ငေးကြည့်နေယင်း မိမိလက်ဖြင့် အသာအယာပွတ်ချေပေးနေပြီး နို့သီးအုံကလေးကို ကိုက်လိုက်နှင့် ကာမ၏ အဓိကသော့ချက်များကို စိတ်တူကိုယ်တူပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆိးပေးနေပါတော့သည်။ အောက်မှရောက်ရှိနေသော ကျော့သည်လည်း အညံ့ခံနိုင်ပါ။ စိုင်း၏ကာမရမက်များကိုလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတော့သည်။ ထို့ပြင်လည်း စိုင်း၏ကာမရမက်များကို ကျင်လည်စွာဖွင့်ပေးနေသောကြောင့် မိမိ၏တကိုယ်လုံးရှိ သွေးကြောများမှ ကာမသွေးများသည် ဒီရေအလားတိုးတက်လာသည့်အတွက် အညိမ်မနေတော့ပါ။ လူးလွန့်လှုပ်ရှား၍ နေပါတော့သည်။
‘စိုင်းရယ်.. ကျော့မနေတတ် မထိုင်တတ်တော့ဘူးကွယ် ဟင်းဟင်း… ဒါကြောင့်မို့လဲ မီမီက အသဲစွဲသွားအောင် ချစ်နေတာပါနော်’
‘ အို..အို စိုင်းရယ် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးဖြစ်နေမှန်းမသိပါဘူးကွယ်.. ဟင့် ဟင့်… ကွယ်လေ .. ကြည့်ပါလားကွယ်… နို့သီးကို အားရပါးရ စုပ်နေလိုက်တာ သူ့ကိုယ်သူ ကလေးပေါက်စကလေးကျနေတော့တာဘဲ…အား… အား… ယားလှပြီကွယ်လို့ ဟားး…ဟေ့..စိုင်း..ကျော့ကို မညှင်းဆဲပါနဲ့တော့ကွယ်….’
ပြောယင်းဆိုယင်းဖြင့်ပင် သူမ၀တ်ထားသော လုံချည်ကိုပင် စိုင်းဆွဲချွတ်နေစရာမလိုတော့ပါ။ ကာမ၏သွေးဆိုးများကို ရွထလာသေကြောင့် မနေနိုင်သည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေယင်းကပင် ကျွတ်ထွက်နေသည့် အောက်ပိုင်းသို့ တပ်မက်စွာဖြင့်အငမ်းမရကြည့်ရှုနေမိပါသည်။ ကျော့၏ပေါင်တန်များသည် ဖြူဖွေးသရောင်ရှိပေမဲ့ အ၀ါရောင်သန်းနေပြီးလျင် စောက်ဖုတ်၏အလည်တည့်တည့်တွင် စောက်ဖုတ်မွှေညင်းစိမ်းများပေါက်ရောက်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။ စောက်ဖုတ်သည် ကြီးမားမို့မောက်လွန်းအားကြီးသည့်အတွက် စိုင်းကပွဲတော်တည်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့်အလား စောင့်မျှော်နေသယောင်ရှိပေတော့သည်။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 08:31